प्रकाश बुझ्दै - येशू ख्रीष्टको प्रकाश
प्रकाशको पुस्तक भन्दा बढी गलत व्याख्या गरिएको कुनै पुस्तक सायद कहिल्यै भएको थिएन। आकस्मिक पाठकको लागि यो एक धेरै रहस्यमय पुस्तक हो - यद्यपि, यसको रहस्यमय प्रकृतिको बावजुद, यसले अझै पनि स्पष्ट रूपमा महत्व र तत्काल चेतावनीको गहिरो भावना व्यक्त गर्दछ! दुःखको कुरा, धेरैले यसको "रहस्यमय" प्रकृतिको फाइदा उठाउन खोजेका छन् र यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न खोजेका छन्, आफैलाई ध्यानाकर्षण गरेर र मानिसहरूको जिज्ञासा र डरबाट धेरै पैसा कमाएर।
यद्यपि यो धेरै गहिरो आध्यात्मिक अर्थहरूको पुस्तक हो, प्रभु येशू ख्रीष्टले यसलाई सबैले ग्रहण गर्न र बुझ्ने उद्देश्य राख्नुभएको थियो - जसरी उहाँले सबैलाई आफ्ना पापहरू त्याग्न र मुक्ति पाउनको लागि इरादा गर्नुभएको छ। सन्देश प्राप्त गर्ने पहिलो चरण भनेको नम्र र टुटेको आत्मा हुनु हो। जतिसुकै अध्ययन गरे पनि बौद्धिक स्वाभिमानीले त्यो प्राप्त गर्दैन। जिद्दी आत्म-इच्छा कहिल्यै यसको वास्तविक अर्थको नजिक आउँदैन। र धार्मिक, अझै पनि पापी हृदय, कुनै पनि प्रकारको समझबाट धेरै टाढा छ।
येशूले भन्नुभयो "हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, कि तपाईंले यी कुराहरू बुद्धिमान् र विवेकीहरूबाट लुकाउनुभएको छ, र बच्चाहरूलाई प्रकट गर्नुभएको छ: त्यसरी नै, पिता; यो तिम्रो नजरमा राम्रो देखिन्थ्यो। सबै कुराहरू मेरा पिताबाट मलाई सुम्पिएका छन्। र पुत्र को हो भनेर कसैले जान्दैन, तर पिताले। र पिता को हुनुहुन्छ, तर पुत्र, र जसलाई पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नेछन्।" (लूका 10:21-22)
स्पष्ट रूपमा यो येशूको प्रकाश हो। तपाईंले यो उहाँबाट प्राप्त गर्नुपर्दछ, र तपाईंले चाहेको कुनै पनि तरिका बुझ्नको लागि उहाँसँग सम्पर्क नगर्नुहोस्!
प्रकाशको पहिलो पदमा, येशूले आफ्ना सेवकहरूलाई आफ्ना सेवकहरूलाई सन्देश पुर्‍याउन भन्नुहुन्छ। यो सेवकको हृदय भएकाहरूलाई मात्र सम्बोधन गरिन्छ। सेवक हुनुको अर्थ के हो बुझ्नुहुन्छ? यस प्रश्नको जवाफ दिन यति छिटो नहुनुहोस् - यो तपाईले अनुभव गर्नुपर्दछ र बुझ्नको लागि बाँच्नुपर्दछ। यस दिन र उमेरमा कमैलाई वास्तवमै थाहा छ कि पूर्ण रूपमा अरू कसैको स्वामित्वमा हुनुको अर्थ के हो, र आफ्नो मालिकको बोली पहिले, आफ्नै भन्दा पहिले। र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि, ख्रीष्टको सेवक हुनु भनेको मायालु, इच्छुक र आज्ञाकारी हृदयबाट सेवक हुनु हो।
तर यदि तपाईं अझै उहाँको विश्वासी सेवक हुनुहुन्न भने निराश नहुनुहोस्। ४० वर्षअघि, म पनि आफ्नो लागि बाँचिरहेको थिएँ, यद्यपि म धार्मिक थिएँ। तर मेरो हृदयले इमान्दारीपूर्वक नम्र तरिकामा खोजिरहेको थियो कि मलाई थाहा छ कि कसरी, त्यसैले येशूले ममाथि दया गर्नुभयो, र मलाई उहाँको महान प्रेमको पर्याप्त खुलासा गर्नुभयो कि म मेरो मार्गबाट पूर्णतया टाढा जान सकूँ र क्षमा माग्न सकूँ। यो "येशू ख्रीष्टको प्रकाश" तर्फको पहिलो कदम हो!